Saraakiil ka tirsan Ciidanka Dowladda oo lagu eedeeyay amni darada ka jirta Wanlaweyn – XAMAR POST
Saraakiil ka tirsan Ciidanka Dowladda oo lagu eedeeyay amni darada ka jirta Wanlaweyn
By Mohamed Ahmed On May 10, 2018
Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa weerarkii Ismiidaaminta ahaa u tiiriyay saraakiil ka tirsan Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo loo dhiibay masuuliyadda ammaanka degmada Wanlweyn.
Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Shabeellaha Hoose C/fataax Xaaji ayaa waxa uu sheegay degmada Wanlweyn amnigeeda in aad loo ilaaliyo, ayna ku yaalaan saldhigyo waa weyn oo ay degna yihiin Ciidanka Dowladda iyo kuwa AMISOM, sida fariisinka Balidoogle oo ay degan yihiin kuwa Kumaandooska Soomaaliya.
Wuxuu sheegay ammaanka degmada in lagu wareejiyay Saraakiil ka tirsan Ciidanka Dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed, balse iyagiina ay uga tageen Maleeshiyaad hubeysan oo danahooda ka raacday, amni darada dhacaysana ay masuul ka yihiin raggii Ciidanka ahaa ee degmada ku magacawnaa.
Dowladda Federaala ayuu ka dalbaday in saraakiishaas ay mariyaan ciqaabtooda, maadaama ay dayaceen nolosha dad shacab ah oo aan waxba galabsan, kuwaasi oo masuuliyada ay ka saarneyn ilaalinta amnigooda.
“Magaaladu waxay aheyd mid aad loo ilaaliyo, xerooyin Ciidan ayaa ku yaalla, laakiin beryahan waxaa soo baxday amni daro magaalada ka jirta, kadib markii Saraakiisha Ciidamada Dowladda ay ammaanka degmada ku wareejiyeen Maleeshiyaad hubeysan, waxaan Dowladda ka codsaneynaa in arrintan ay wax ka qabato.” Ayuu yiri Guddoomiye C/fataax Xaaji.
Dowladda Federaalka iyo Maamulka Koonfur Galbeed waxay u muuqdaan kuwa iska iloobay xaqii uu lahaa Gobolka Shabeellaha Hoose, maadaama ay kordheen dilalka iyo qaraxyada ka dhaca Gobolka.
AL-shabaab oo muddo kooban la wareegay deegaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud
Nabad Sugidda Gedo oo sheegay inuu isu dhiibay Nin ka tirsanaa Al-shabaab